Mareykanka oo qirtay in dad aan waxba galabsan uu ku laayay Kaabuul - Bulsho News
Fahad Yaasiin oo "lagu xannibay Jabuuti
Faransiiska ayaa qaaday tallaabo aan horey loo arag isagoo ka...
Mareykanka oo qirtay in dad aan waxba galabsan uu ku laayay Kaabuul
Mareykanka ayaa haatan qirtay in duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacday magaalada Kaabuul ee dalka Afqaanistaan maalmo uun ka hor inta aysan ciidamadiisu ka bixin dalkaasi ay ku dhinteen 10 qof oo aan waxba galabsan, sida uu CBS News u sheegay sarkaal Mareykan ah.
Baaritaan ayaa lagu ogaaday in duqeyntaasi oo dhacday 29 -kii Ogosto lagu dilay shaqaale samafal oo aan waxba galabsan iyo sagaal xubnood oo qoyskiisa ka tirsan, kuwaa oo ay ku jiraan toddoba carruur ah.
Cannuga ugu da’da yar ayaa la sheegayaa in uu jiray laba sano oo kaliya.
Sirdoonka Mareykanka ayaa muddo siddeed saacadood ah ku raad joogay gaariga uu watay ninkaasi, iyagoo rumeysnaa in uu xiriir la lahaa kooxda la baxday dowladda Islaamka ee gobolka Khorasan.
Duqeyntaasi ayaa ahayd falkii ugu dambeysay ee ciidamada Mareykanka ay ka fuliyaan gudaha dalka Afqaanistaan, ka hor inta aysan soo afjarin howlgalkooga milatari ee ay ka wadeen gudaha dalkaasi muddo 20 sano ah.
Baaritaan uu sameeyay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa lagu ogaaday in baabuurka ninkaasi samafalka ka shaqeynayay lagu arkay goob lagu tuhmayay kooxdaasi Dowladda Islaamka ee Khorasan iyo in dhaqdhaqaaqiisa uu la tuhun geliyay sirdoonka oo la socday qorshayaashe la sheegay in kooxdaasi ay damacsan tahay in ay weerar ku qaado garoonka diyaaradaha ee Kaabuul.
Intii lagu raad joogay gaariga ninkaasi ayaa diyaarad aan duuliye lahayn oo wax basaasta ayaa aragtay rag qeybta dambe ee baabuurka ku ridaya wax u muuqday walxaha qarxa, balse markii dambe waxaa la ogaaday in waxaasi ay ahaayeen weelal biyo lagu shubto.
Jeneraal Kenneth McKenzie ayaa duqeyntaasi ku tilmaamay mid khaldan oo naxdin leh isla markaana ay tahay wax aan macquul ahayn in la yirahdo qoyskaasi wuxuu xiriir la lahaa kooxdaasi ama uu khatar ku ahaa ciidamada Mareykanka.
“Waxay ahayd khalad, waxaanan ka bixinayaa raalligelin buuxda”, ayuu yiri jeneraalkani.
Duqeyntaasi ayaa dhacday xilli ninkaasi samafalka ka shaqeynayay oo lagu magacaabo Zamairi Akmadhi – uu soo galay waddada soo gasha gurigiisa oo 3km u jirta garoonka diyaaradaha.
Duqeyntaasi ayaa waxaa markii hore ka dhashay qarax weyn oo labaad, kaasi oo markii hore saraakiisha Mareykanka ay sheegeen in uu caddeyn u yahay in gaariga uu siday walxaha qarxa. Balse baaritaan kaddib ayaa la ogaaday in ay u badan tahay in qaraxa labaad uu ka dhashay haan uu ku jiray gaaska wax lagu karsado oo waddada tiilay.
Ehelada dadkii ku dhintay duqeyntaasi ayaa BBC-da u sheegay in dhibbaneyaashu ay codsadeen in loo qaado dalka Mareykanka isla markaana ay sugayeen wicitaan loogu sheegayo in ay aadaan garoonka diyaaradaha oo ay halkaa ka dhoofaan.
Mid ka mid ah dadka ku dhintay duqeyntaasi Mareykanka, Ahmad Naser, ayaa turjubaan u ahaa ciidamada Mareykanka. Dhibbanayaasha kale ayaa horey ugu soo shaqeeyay hay’ado caalami ah, waxayna haysteen dal-ku-gal u oggolaanaya in ay galaan dalka Mareykanka.
“Waa khalad, waa weerar wuxishnimo ah, oo ku yimid xog khaldan,” ayuu yiri Ramin Yuusufi, oo ka mid ah ehelada dadkaasi lagu laayay duqeynta.
Wuxuu intaas ku daray, isaga oo ilmeynaya: “Maxay u laayeen qoyskayaga? Carruurtayada? Aad bay u gubteen oo xitaa ma aqoonsan karayno jirkooga iyo xitaa wajiyadooda.”
by Bulsho Media 7 mins ago 7 mins ago
Maxay kawada hadleen Farmaajo iyo Amiirka dalka Qadar
Fallanqeyn: Sidee Maxkamadda ICJ ku gaartay go’aanka kiiska...
UK Oo Shaacisay Magaca Soomaaligi Dilay Xildhibaan Sir...
Arsenal Oo Diyaarinaysa Dalab Ay Ka Gudbinayso Xiddig...
Lionel Messi Oo Magacaabay Xiddigaha Uu Codkiisa Siin...
Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda GURICEEL
Sawirro: Xil kala wareejin ka dhacday Villa Soomaaliya
Rwandan court finds Hotel Rwanda hero guilty of...
Baarlamaanka Puntland Oo Ansixiyay Xisaab-Xirka Miisaaniyadda 2020
Sindhu Vee and her father go back in...
France cancels defence meeting with UK over submarine...